जनप्रतिनिधि नै बालुवा चोर
अध्यक्ष र वडाध्यक्षकै मिलेमतोमा बोर्ड टाँसी सवारी कर उठाउँदै
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि नै अवैध बालुवा निकासीमा लागेका छन् ।
ललितपुरको दक्षिण भेगका स्थानीय जनप्रतिनिधि यस्तो कारोबारमा संलग्न हुन थालेका हुन् । गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, वागमती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन, वागमती गाउँपालिका वडा– ३ का वडाध्यक्ष विष्णु तिमिल्सिनालगायत जनप्रतिनिधि अवैध निकासीमा लागेको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।
वागमती गाउँपालिका भट्टेडाडाँका स्थानीय श्याम लोप्चनले भने, ‘खोला र सडकछेउका जग्गा उधिनेर धमाधम बालुवा तस्करी भइरहेको छ ।’ उनले थपे, ‘यसमा मुख्य हात जनप्रतिनिधिकै छ, उनीहरूले कडाइ गरेको भए यसरी बालुवा र ढुंगा तस्करी हुने थिएन ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा ललितपुरका खानीखोला, ठोस्ने खोला, टुंगुन खोलासहित स्थानीय साना खोलाबाट बालुवा तथा ढुंगाको अवैध उत्खनन र निकासी हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिनै प्रहरीसँग सेटिङ मिलाएर दैनिक २० टिपरभन्दा बढी बालुवा र ढुंगा निकासी भइरहेको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।
ललितपुरमा उत्खनन गरिएको बालुवा र ढुंगा काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङलगायत जिल्लामा पुर्याइन्छ । ढुंगा र बालुवा निकासीमा प्रयोग हुने टिपर र उत्खननमा प्रयोग गरिने स्काभेटर तथा डोजरसमेत जनप्रतिनिधिकै भएकाले अवैध कार्यमा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुन्छ ।
वागमती गाउँपालिका वडा–३ का वडाध्यक्ष तिमिल्सिनाको नाममा रहेको बा. २ ख ९८१६ नम्बरको टिपरसहित उनकै नाममा रहेका स्काभेटर र डोजर अवैध बालुवा उत्खनन् र निकासीमा प्रयोग भइरहेका छन् ।
तिमिल्सिना स्वयं आफ्ना नामका सवारीसाधन र उपकरण बालुवा उत्खनन र निकासीमा प्रयोग भएको स्विकार्छन् । तर, उनी बालुवा उत्खनन र निकासी गैरकानुनी नभएको दाबी गर्छन् ।
तिमिल्सिनाले भने, ‘हामीले मात्रै बालुवा झिकेका छैनौँ ।’ उनले थपे, ‘अरुले पनि खोलाको बालुवा झिकेर तस्करी गरेका छन्, यसलाई सबै मिलेर रोक्नुपर्छ ।’
तिमिल्सिनाले गाउँपालिकाले प्रतिटिपर ६ रुपियाँ कर उठाएर निकासी गर्न छुट दिएको बताए । तिमिल्सिना मात्र होइन, दक्षिणी ललितपुरका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गरेका २० वटाभन्दा बढी टिपर बालुवा निकासीमा प्रयोग भइरहेका छन् ।
गत साता भट्टेडाँडा पुग्दा बा.४ ख ५१०६, बा.४ ख २५२६, बा.४ ख ४५५१, बा.२ क ३४६७ लगायत नम्बर प्लेट भएका टिपरले विभिन्न खोलाबाट बालुवा तस्करी गरिरहेको भेटिएको थियो । दक्षिणी ललितपुरबाट गोदावरी नगरपालिकास्थित चापागाउँ हुँदै विभिन्न क्षेत्रमा बालुवा र ढुंगा तस्करी हुने गरेको छ ।
एउटा टिपरले दैनिक चार पटकसम्म बालुवा र ढुंगा तस्करी गर्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । दक्षिण ललितपुरबाट गुडेका मालवाहक टिपर तथा अन्य सवारीसाधनको मुख्य चेकपोस्ट महानगरीय प्रहरीवृत्त चापागाउँ हो । अवैध रूपमा भइरहेको बालुवा र ढुंगा निकासीलाई भने प्रहरीले समेत बेवास्ता गरिरहेको छ ।
दक्षिणी ललितपुरबाट गोदावरी नगरपालिकास्थित चापागाउँ हुँदै विभिन्न क्षेत्रमा बालुवा र ढुंगा तस्करी हुने गरेको छ । एउटा टिपरले दैनिक चार पटकसम्म बालुवा र ढुंगा तस्करी गर्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
प्रहरीवृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले रातको समयमा तस्करी बढ्ने गरेकोले रातको समयमा निगरानी बढाएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीले सक्दो निगरानी गर्ने हो । तर, अधिकांश टिपरमा जनप्रतिनिधिकै नाम जोडिएर आउँछन् । त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ ।’
रातभरि जाग्छन् तस्कर !
वागमती गाउँपालिका– ३ मा पर्ने खानीखोला, ठोस्नेखोला र टुंगुन खोलामा रात परेपछि ढुंगा, गिटी र बालुवा उठाउनेको भीड लाग्छ । खोला किनारमा टिपर लामबद्ध हुन्छन् ।
जनप्रतिनिधिको सहारामा टर्चलाइट बालेर खोलाको बालुवा उठाउन ५० भन्दा बढी व्यक्ति सक्रिय छन् । दक्षिण ललितपुरबाट यसरी ल्याइएको बालुवा ललितपुरको चापागाउँ, नख्खु, एकान्तकुना हुँदै काठमाडौं तथा धादिङसम्म पुग्ने गरेको चापागाउँका स्थानीय अजयमान महर्जनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘गोदावरी नगरपालिका र वाग्मती गाउँपालिकाको सेटिङमा अहिले दक्षिण ललितपुरबाट बालुवा, गिटी सहरमा भित्रिने गरेको छ ।’
उनले थपे, ‘यसमा जनप्रतिनिधिको ठुलो चलखेल छ ।’
गाउँका खोलाबाट सित्तैमा उठाएको बालुवा तस्करले १५ देखि २० हजारसम्म बेच्ने गरेका छन् । काठमाडौंलाई हेटौँडासँग जोड्ने मुख्य सडक कान्ति लोकमार्ग फराकिलो भएसँगै टिपरमा यसरी बालुवा, गिटी र ढुंगा तस्करी हुन थालेको भट्टेडाँडाका स्थानीय सुवासराम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
एक स्थानीयले भने, ‘यहाँका प्रहरी, जनप्रतिनिधि र ठुला व्यवसायी मिलेर बालुवा र ढुंगा तस्करी गरिरहेका छन् । हामीले विरोध गरेको हो, तर टेरेनन् ।’
गोदावरी गाउँपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले बालुवा र गिटी सहरमा ल्याइएको स्विकारे ।
महर्जनले भने, ‘पहिले–पहिले बन्द भएका केही खानी पनि हामीले अहिले सञ्चालन गरेका छौँ ।’ उनले थपे, ‘सस्तोमा खोलाको किनारमा भएको वस्तुलाई बजारसम्म ल्याएर बिक्री गर्नु राम्रै त हो नि ।’
जथाभावी सवारी पास कर वागमती
गाउँपालिकाले मनपरी रूपमा सवारीकर असुल्ने गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षकै मिलेमतोमा बोर्ड टाँसेर सवारी कर उठाउन थालिएको हो । यसरी उठाएको कर कहाँ जान्छ भन्ने स्थानीयलाई थाहा छैन । गाउँपालिकाले पनि यसको कुनै लेखाजोखा राखेको छैन ।
वडा– ३ का वडाध्यक्ष विष्णु तिमिल्सिनाले भने ‘गाउँपालिकाका सबै गतिविधि हामीलाई जानकारी हुन्न । मेरो वडामा पर्ने भए पनि मैले यसबारे बोल्न मिल्दैन ।’
उनले गाउँपालिकाकै अनुमतिमा स्थानीयले कर संकलन गरेको दाबी गरे । उनी यसो भन्दै पन्छिए, ‘यस्तो कार्यलाई खराब भन्न मिल्दैन । दुई वर्षको निश्चित मूल्य तोकेर स्थानीयलाई ठेक्का दिइएको हो, यसबाट उठेको रकम गाउँपालिकामा संकलन हुन्छ ।’